FAQs - Shandong Buluoer Akangwara Technology Co, Ltd.
Mubvunzo: Sei CNC Fibre Laser Kucheka Muchina weCarbon Simbi & Isimbi Simbi vimbiso?
Re: a1. CNC Fibhurosi Laser Kucheka Muchina weCarbon iron & Stainless Steel warrenty nguva iri gumi nemaviri mushure meBB nguva;
a2.12 maawa kwechigadzirwa rutsigiro mhinduro;
a3. Yega machining fekitori, iyo inogona kudzora iyo yekuparadza zvikamu zvemhando yepamusoro;
a4. Eni zvinhu zvekuchengetedza uye mushandisi anogona kunakidzwa nemumiririri mutengo.
B. Mubvunzo: Sei nguva yekuzvara?
Re: Tinogona kuendesa michina mukati memazuva 15-25 kana isu tine michina muchitoro.
Iyo yakajairika muchina yekugadzira nguva ndeye mazuva mashanu uye CNC muchina wekugadzira nguva ingangoita mazuva 25-45.Kana iwe wajaira
zvigadzirwa, iyo nguva yekutumira ichazopihwa mushure mekusimbiswa.
C. Mubvunzo: Kubhadhara kuri sei?
Re: 50% yemari sedhipoziti uye iyo bhezari inofanirwa kubhadharwa neT / T kana LC pakuona musati mutengesi aendesa michina ku
D: Mubvunzo: Chii chiri package?
Re: Tine matatu akaturikidzana pasuru. Kune vekunze, isu tinotora huni hunyanzvi kesi. Pakati, muchina wakafukidzwa nehuputi, kuchengetedza
muchina kubva mukubvunda. Zvemukati wedenga, muchina wacho unofukidzwa nehurefu purasitiki bhegi remvura.
E: Mubvunzo: Ndingaite sei kana muchina wakanganisa?
Re: Kana ukasangana nematambudziko akadaro, ndapota taura nesu asap uye usaedze kugadzirisa muchina iwe kana mumwe munhu.
Q1: Zvakadii nezve garandi?
A1: Makore maviri emhando yekuvimbiswa, muchina une zvikamu zvikuru (kusara nezvakadyiwa) zvichashandurwa zvisina mubhadharo (zvimwe zvikamu zvichachengetwa) kana paine chero dambudziko munguva yewarandi.
Q2: 2 Handizive kuti ndeipi yakakodzera kwandiri?
A2: Ndokumbira ndiudze chako
1) Max saizi yebasa: sarudza yakakodzera mhando.
2) Zvishandiso uye Kucheka ukobvu :: sarudza yakakodzera simba.
Q3: Mari yekubhadhara?
A3: Alibaba vimbiso yekutengeserana / TT / West Union / Payple / LC / Cash uye zvichingodaro.
Q4: Iwe une zvinyorwa zvetsika zvakajeka?
A4: Ehe, isu tine.Pakutanga tichakuratidza uye Uye mushure mekutumirwa isu tinokupa iwe Kurongedza runyorwa / Zvekutengesa invoice / Yekutengesa kondirakiti / Bhiri yekutakura yekutora tsika.
Q5: Handizive mashandisiro andinoita kana ndagamuchira Kana ndine dambudziko panguva yekushandiswa, ndoita sei?
A5: 1) Isu takaita vhidhiyo, unogona kudzidza nhanho nhanho, uye tinogona kuendesa tekinoroji yedu kudivi rako rekudzidziswa.
2) Kana paine chero dambudziko panguva yekushandisa, iwe unoda nyanzvi yedu kutonga
Dambudziko kune imwe nzvimbo richagadziriswa nesu. Tinogona kupa timu vatariri
/ Whatsapp / Email / Runhare / Skype necam kusvika matambudziko ako ese apera.Tinogona zvakare kupa Door service kana uchida.
Q6: Nguva yekuendesa
A6: General gadziriso: Mazuva manomwe. Yakasarudzika: 7-10 anoshanda mazuva.
Kana iwe uchida kuziva kana muchina unogona kushanda pane zvako zvinhu, ndokumbira undiudze:
1.Izvinhu zvipi zvaunoda kucheka?
Nekuti yakasarudza kukura kwekushanda kwemushini.
Ukangondiudza nezve izvi, ipapo ini ndinokwanisa kukurudzira iwe muchina wakakodzera kwazvo uye mutengo wakanakisa iwe. Kana isu tinogona kugadzirisa imwe yako.
Aka ndekekutanga kushandisa ini rudzi urwu rwemuchina, zviri nyore kushanda?
1. Chirungu gwara vhidhiyo uye kurairirwa bhuku rinotumirwa kwauri mahara pamwe necnc router.
2. Yemahara yekudzidzisa kosi mufekitori yedu. Mainjiniya aripo ekushandira mhiri kwemakungwa asi mari dzese dzinoda kubhadharwa parutivi rwako.
3. Maawa makumi maviri nemana kutsigirwa kwehunyanzvi nekufona, vhidhiyo uye email.
30% T / T pamberi, 70% T / T vasati vatakura.
Mushure mekunge tagamuchira yako dhipoziti, isu ticharonga kugadzirwa, panguva yekugadzira nguva, isu ticha taurira dhizaini yekugadzirwa, kufambira mberi kwechigadzirwa kuti ive nechokwadi chekuti vatengi vanyatsotonga, parizvino mifananidzo yemuchina nemavhidhiyo zvinotumirwa kune vatengi munguva, pavanenge vava nechokwadi chekuti zvese zviripo zvakanaka, chinjana zviyero uye isu tinoronga kuendesa kumuchina.